रोनाल्डो भित्रिएपछि युभेन्टसको शेयरको मूल्य आकासियो | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
(July 21, 2019)
रोनाल्डो भित्रिएपछि युभेन्टसको शेयरको मूल्य आकासियो
असार २७, २०७५ बुधबार १४:४५:५७ | उज्यालो सहकर्मी
रियल मड्रिडबाट युुभेन्टसमा आवद्ध भएका राेनाल्डोले क्लबका लागि कति गोल गर्लान ? पहिलो वर्ष कति उपाधि जिताउलान् ? पूरा चार वर्षको उनको करियर कस्तो होला ? यी प्रश्नहरुको जवाफ आउने समयले बताउने नै छ ।
तर रोनाल्डो भित्र्याउन नपाउँदै युभेन्टसले आर्थिक फड्को मार्न थालिसकेको छ ।
अझ रोनाल्डो भित्र्याउने चर्चा सुरु भएदेखि नै युभेन्टसको स्टक मार्केटको मूल्य आकासिएको छ । इटालीको सबैभन्दा सफल क्लबले रोनाल्डोलाई सम्झौता गर्ने पक्कापक्की भएपछि नै उकालो लाग्न थालेको युभेन्टसको शेयरको मूल्य बढ्ने क्रम जारी छ ।
केही दिनअघि स्पेनिस मिडियाले रोनाल्डो सम्झौताका बारेमा समाचार प्रकाशन गरेपछि लगातार बढ्दै आएको शेयरको मूल्य बुधबार ५.८९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
सोमबारको तुलनामा मंगलबार ३.२ प्रतिशतले बढेको थियो । एक सातामा उसको शेयर बजार झण्डै २५ प्रतिशतले उकालो लागेको हो । युभेन्टसको पछिल्लो चार महिनामा यो सबैभन्दा राम्रो नतिजा हो । युरोपेली स्टक मार्केटमा युभेन्टस अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४० प्रतिशतले माथि उठेको छ ।
युभेन्टसको आर्थिक भविष्य निकै राम्रो देखिएको छ । इटालियन शीर्ष डिभिजनको युभेन्टसमा रोनाल्डोको उपस्थितिका कारण प्रसारण अधिकार पनि बढ्न सक्नेछ ।
जसका लागि टेलिभिजन नेटवर्कहरुको चरम प्रतिष्पर्धा हुनेछ । युभेन्टसलाई मात्र होइन इटालियन लिग सिरी ए कै आमदानी पनि बढ्नेछ । यससँगै युभेन्टसको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच र प्रतिष्ठा पनि बढ्नेछ । साथै क्लबसँग सम्बन्धीत फुटबल किट, जर्सी, ब्याज लगायतका सामग्रीहरुकाे बिक्री बढेर मनग्य अाम्दानी भित्रिनेछ ।
अघिल्लो वर्ष युभेन्टसले विश्व बजारमा आठ अर्ब अमेरिकी डलर आम्दानी हात पारेको थियो । सन् २०२० सम्म उसको ४७ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
एबी डिभीलियर्सले लिए अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास
विप्लवका काठमाण्डौ उपत्यका इञ्चार्ज माइला लामा पक्राउ
उडान स्थगित हुँदा हजयात्री अलपत्र
सयौँ बालबालिकाको भविष्य अन्योलमा